Ndege itsva dzekuLas Vegas kubva kuSan Jose, Boston, Orlando neFort Lauderdale paUnited Airlines
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege itsva dzekuLas Vegas kubva kuSan Jose, Boston, Orlando neFort Lauderdale paUnited Airlines
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • misangano • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Ndege itsva dzekuLas Vegas kubva kuSan Jose, Boston, Orlando neFort Lauderdale paUnited Airlines.
United Airlines ichabhururuka nendege makumi masere nerimwe kuenda kuLas Vegas mukati memazuva epamusoro ekusvika kwaNdira 81-3, uye nendege zana nemapfumbamwe pamazuva ekutanga ekubva muna Ndira 4-109.
Zvinoenderana neongororo ichangoburwa yevatengi vebhizinesi veUnited, vangangoita makumi maviri muzana vanoti vanotarisira kuenda kumisangano uye makonferensi anodarika pre-denda muna 20.
Pakati paGumiguru 27 naNovember 9, kutsvaga pawebhusaiti yeUnited kwendege kuenda kuLas Vegas panguva yeCES 2022 kwakakwira 70% zvichienzaniswa nenguva yemavhiki maviri apfuura.
United Airlines iri kuwedzera 80% yehukuru hwayakaita kuCES muna 2020, zvichiratidza kuti kufamba kwebhizinesi kuri kuenderera.
Mukupindura mhinduro kubva kune vatengi vebhizinesi rayo uye nekuwedzera mukudiwa, United Airlines iri kuwedzera hurongwa hwayo kuita kuti zvive nyore kune vanopinda CES 2022 kujoina mu-munhu show mu Las Vegas. Ndege iri kuwedzera ndege gumi neina dzakananga kutanga kwaNdira pakati peLas Vegas neSan Jose, Calif., Boston, Fort Lauderdale, neOrlando, uye iri kuwedzera ndege makumi matatu kubva kunhandare dzendege muSan Francisco, Los Angeles, New York/Newark. , uye Washington DC/Dulles. Izvi zvinomiririra kuwedzera kwehuwandu hwe14% zvichienzaniswa nehurongwa hwayo hwaNdira kuLas Vegas.
"Kudzoka kwemisangano mumunhu nezviitiko chiratidzo chakanaka mukupora kwedenda, uye United yakamisikidzwa kuita mari pakuwedzera uku kwekuda," akadaro Ankit Gupta, mutevedzeri wemutungamiri weDomestic Planning neUnited Express. "Tiri kuwedzera zvikamu makumi masere kubva muzana zvehunyanzvi hwatakaitira CES muna 80, zvichiratidza kuti kufamba kwebhizinesi kuri kuenderera uye vatengi vedu vane shungu yekubatana nevatengi uye vatinoshanda navo."
Pakati paGumiguru 27 naNovember 9, tsvaga United Airlines webhusaiti yekukwira nendege kuenda Las Vegas panguva yeCES 2022 vaive vakakwira makumi manomwe muzana kana zvichienzaniswa nenguva yemavhiki maviri apfuura. Uye maererano neongororo ichangoburwa yevatengi vebhizinesi veUnited, vangangoita makumi maviri muzana vanoti vanotarisira kuti kufamba kuenda kumisangano uye makonferensi kuchapfuura pre-denda muna 70.
United Airlines ichabhururuka nendege 81 kupinda Las Vegas mukati memazuva epamusoro ekusvika kwaNdira 3-4, uye 109 ndege pamazuva ekutanga ekuenda kwaNdira 8-10.
Ndege itsva dzinosanganisira:
8 ndege dzakananga kubva kuSan Jose, California
6 ndege dzakananga kubva kuFort Lauderdale, Boston neOrlando
15 dzimwe ndege kubva kuSan Francisco, uye 9 ndege mundege hombe
8 dzimwe ndege kubva kuLos Angeles, uye 4 ndege mundege hombe
5 dzimwe ndege kubva kuWashington DC/Dulles
2 dzimwe ndege kubva kuNew York/Newark